5 Sababood oo ah INAAD UU u soo rarinin Muusikadaada ama Fiidiyowga Koox saddexaad | Martech Zone
5 Sababood oo ah IN AAD UU u Dhigin Muusikadaada ama Fiidiyowga Koox saddexaad
Axad, Sebtembar 24, 2006 Sabtida, Maarso 31, 2007 Douglas Karr
Immisa idinka mid ah ayaa akhriya "Shuruudaha Adeegsiga"? Haddii aad ku bixinayso waxyaabo adoo adeegsanaya dhinac saddexaad, runtii waxaad u baahan kartaa inaad dib uga fikirto. Fursadaha ayaa ah inay leeyihiin xuquuq buuxda, boqortooyo-la'aan ah, oo ay ku maamuli karaan kuna qaybin karaan waxyaabahaaga iyagoo aan weligood kaa magdhabin. Haddii aad mari doontid dhibaatada jarista fiidiyowga, mp3, Podcast, iwm…. lacagta ku bixi oo adigu martigeli. Habkaas uma baahnid inaad ku raacdid qaar ka mid ah Shuruudaha Isticmaalka cajiibka ah ee u oggolaan doona shirkad weyn inay sameyso xitaa lacag ka badan waxyaabahaaga.
Haddii aad fiidiyoow u geliso Youtube-ka Youtube-na ay ka hesho hal milyan oo hits ka mid ah… lacag uun baad ku shubtaa jeebkooda! Maxaad taas u samayn lahayd?
Youtube - waxaad siineysaa Youtube-ka adduunka oo dhan, oo aan gaar u ahayn, xoriyad boqornimo, shardi iyo layn wareejin ah si loo isticmaalo, u tarmo, loo qaybiyo, loo diyaariyo shaqooyinka soo-saarista ah, la muujiyo, loona sameeyo Soo-gudbinta Isticmaalaha ee la xiriirta Websaytka Youtube iyo Youtube-ka (iyo ganacsigeedii beddelkiisa, oo ay kujirto iyada oo aan xadidnayn kor u qaadista iyo qaybinta qayb ama dhammaan Websaydhka Youtube (iyo shaqooyinka ka soo baxa) qaabab kasta oo warbaahineed iyo iyada oo loo marayo wadiiqooyinka warbaahinta.
Google - adigu waxaad ku amreysaa oo aad u oggolaanaysaa Google, oo aad siineysaa Google xuquuq aan lahayn boqortooyo, xaq u lahaansho iyo ruqsad si ay u martigeliso, u kaydiso, marin u dirto, u kaydiso, u nuqul u sameyso, wax uga beddesho, u qaybiso, ugu muujiso, dib u habeyn ku sameyso fududeeyo iibinta ama kireynta nuqulada, falanqaynta, iyo abuuritaanka algorithms ku saleysan Mawduuca La Oggol yahay si (i) loogu martiqaado Mawduuca La Oggol yahay ee server-ka Google, (ii) tusmada Mawduuca La Oggol yahay; (iii) bandhig, fulin iyo qaybinta Mawduuca Idman
MySpace - Adoo soo bandhigaya ama daabacaya ("dhejinaya") Wax kasta oo ku jira ama u maraya Adeegyada MySpace, waxaad halkan ku siineysaa MySpace.com ruqsad xadidan oo ah adeegsiga, wax ka beddelka, fagaaraha, bandhigga guud, soo-saaridda, iyo baahinta waxyaabahaas oo keliya iyadoo la adeegsanayo iyo iyada oo loo marayo Adeegyada MySpace.
FLURL - Waxaad ku siineysaa Adeeg liisan aan gaar aheyn si loo daabaco, loo suuq geeyo, loo iibiyo, loo sharciyeeyo, looga faa'iideysto, loona isticmaalo si kasta, dhammaan agabyada la siiyay Adeegga, Websaydhka, iyo / ama loo adeegsaday si kasta oo Adeegga ah, oo ay ku jiraan laakiin ku xaddidan yihiin muusikada, sawirrada, qalabka suugaanta, farshaxanka, magacyada, cinwaanada iyo astaamaha, calaamadaha ganacsiga, iyo hantida kale ee aqooneed. Wax magdhaw ah lagaa siin maayo soo dejinta ama walxaha kale ee lagu siiyay Adeegga.
DropShots - DropShots waa, haddii aan si kale loo sheegin, milkiilaha dhammaan xuquuqda lahaanshaha xuquuqda iyo macluumaadka ee Adeegga iyo waxyaabaha ku jira. Ma daabici kartid, qaybin kartid, soo saari kartid, dib u isticmaali kartid ama soo saari kartid wax kasta oo ka mid ah nooc kasta oo nooc ah (oo ay ku jiraan nuqul ka sameynta ama ku keydinta qaab kasta oo elektaroonig ah) marka laga reebo iyadoo la raacayo liisanka isticmaalka xaddidan ee ku xusan ogeysiiskayaga xuquuqda lahaanshaha.
Jooji bixinta waxyaabahaaga bilaash ah! Shirkadaha waaweyni waxay ballan qaadayaan INAAD marna ka faa'iideysan doonin waxyaabahaaga ka baxsan qaybinta bogga internetka. Shirkadaha waaweyni waxay bixin doonaan magdhow haddii ay u adeegsadaan waxyaabahaaga ka baxsan goobta. Shirkadaha waaweyni sidoo kale waxay kuu oggolaan doonaan inaad sii waddo LAHAYN mawduucaaga - xitaa ka dib markaad ka tagto adeeggooda.
Akhriso Shuruudaha Isticmaalka!
Bogga Akhriska ee La Cusboonaysiiyay
Khibraddu waa bilaash, ilaha ma aha not
Sep 24, 2006 at 9: 58 PM
Qoraal wanaagsan. Maxaad ka fikirtaa Revver.com, oo kuu kala qaybisa lacagta laga helo waxyaabahaaga?
Sep 24, 2006 at 10: 16 PM
Waxaan hadda helaya qalad qoraal 500 ah oo ku saabsan boggooda ...
Waxaan eegi doonaa Shuruudaha Isticmaalka markay soo noqdaan. Anigu ma ihi qareen - waxaan si fudud u fiirsaday maqaallo iyo doodo badan oo ka hadlaya waxyaalahan isu-soo-ururiyayaasha si run ah ugu sheegaya isticmaaleyaashooda cidda 'iska leh' waxyaabaha ay ka kooban yihiin, sida looga faa'iideysan karo, iyo in haddii aan waligood magdhow la siin karin iyo in kale. isticmaalka.
Sep 25, 2006 at 2: 23 PM
Qoraal aad ufiican, Doug.
Gaar ahaan iyada oo la tixgelinayo in xitaa warbaahinta hodanka ah ee martigelinta aysan mar dambe u baahnayn gacan iyo lug… (Halkan waxaan kugula talin karaa MediaTemple kaas oo aan u wareegay kadib markii aan aamin u ahaa alaab-qeybiyeheygii asalka ahaa ilaa 5 sano. Waxay leeyihiin qanacsanaan macmiil oo aad u saraysa, waxaanan la yaabay xawaaraha ay ugu jawaabaan e-maylada macaamiisha aan geeky. (Oo maya, aniga shaqaalay iguma hayaan…)
Sababta kale ee ah inaad martigalin weydo waxyaabaha aad iska leedahay dhinac saddexaad waa, ma ogidin sida ay u beddelaan siyaasaddooda mustaqbalka - waa hagaag, ama weligaa ma garanaysid sidaad kanaga u beddesho… (Bal ka fikir inaad sameyso muuqaal / hees qabow oo aad gelisay khadka tooska ah, iyo qaar ka mid ah hay'adaha suuqgeynta ayaa doonaya inay kaa iibsadaan - runti ma iibin kartid markii aad ogolaato shuruudaha ay Doug dejisay…)
Marka: naftaada martigeli. Ku farax Noqo qof hal abuur leh.
Oo sida fur, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah fiidiyowyada aan toogtay.
Waxaan kaliya rabay inaan si dhaqso leh uga hadlo maqaalkaaga. Mahadsanidiin adiga oo ku dhiirrigelinaya fannaaniinta ka fiirsanaya u gudbinta warbaahintooda dhinac saddexaad oo martigeliye / qeybiya. Xaqiiqdii, dad badan oo hal abuur leh ayaa ku fashilmay inay tixgeliyaan ganacsiga iyo dhinacyada sharciga ee warshadaha madadaalada iyo hantida aqooneed, waana u fududaan kartaa dadka danaystayaasha ah - ha noqdaan maamuleyaal, wakiilo, sumadaha diiwaanka (yar ama weyn), ama hawl wadeyaasha shabakadda - ka faa'iideyso kuwa aan lahayn aqoon ganacsi ama faham aasaasi ah oo ku saabsan sharciga xuquuqda lahaanshaha Mareykanka.
Taas markii la yidhi, daabacayaasha saddexaad iyo qaybiyayaashu waxay la tageen xulasho la'aan laakiin waxay u baahan yihiin in milkiilayaasha xuquuqda daabacaadda ay siiyaan dhinac saddexaad a aan-gaar ahayn ruqsad siinta xuquuqda gaarka ah ee qofka leh xuquuqda lahaanshaha (farshaxanka), dhexdhexaadxuquuqaha soo saarida, qaybinta, iyo si guud u soo bandhigida waxyaalaha xuquuqdooda leh. Haddii kale, daabacaha dhinac saddexaad wuxuu mas'uul ka yahay ku xadgudubka xuquuqda lahaanshaha. Taasi waa sababta luqadda ku xusan shuruudaha adeegsiga ee la soo sheegay ay aad isugu eg yihiin (oo degelkeenna hubaal kama reeban yahay).
Haddii daabacaha dhinac saddexaad raadsado gaar ah liisanka, markaa taasi waa laga shakisan yahay, iyo in adeeggaas laga yaabo in laga fogaado, iyadoo kuxiran duruufaha.
Ruuxa Radio LLC
Apr 23, 2007 at 4: 05 PM
Sidee qofku u martigeliyaa fiidiyowgooda ama fiidiyowgooda? Waxaan ku leeyahay fiidiyoow websaydhkayga laakiin sidee baan uga dhaadhicin karaa dadka in ay arkaan?
Apr 26, 2007 at 2: 07 PM
Fadlan noo sheeg shirkadaha waaweyn ee aad ka hadasho dhammaadka boostadaada! Waad iga tagaysaa anigoo sudhan! Waxaan jeclaan lahaa inaan ilaaliyo dhamaan xuquuqda muusigayga, hase yeeshee waxaa laygu qasbay inaan u adeegsado qaar dhexdhexaadiyaal ah xaqiiqda fudud ee ah meesha ay dhagaystayaashu ku jiifsadaan.
Waxaan u maleynayaa in goobaha qaab dhismeedka bulshada, kuwa REAL, sida qabiilka.net ay yihiin saldhigyo u bisil fanaanka ay xukumaan warbaahinta baahisa. Waqtigan xaadirka ah midka gaarka ahi waa iyada oo aan lahayn awooda martigelinta muusikada, haddana waxay u oggolaaneysaa isku xirnaanta gundhigga bogagga waxyaabaha sida YouTube. Waxaan hayaa akoon MySpace ah oo lalaxiriirto SnowCap, hadana waxaa laga yaabaa inaan dejiyo qiimaha heesta, oo markaas ay calaamadeeyaan. Kaliya waan ku ciyaarayay oo waxaan ubaahanahay soo-gaadhis dheeri ah, markaa waa inaan tixgeliyaa martigalinta shaqadayda meelo kale. Goobaha waaweyni waxay umuuqdaan kuwa qarka u saaran inay buuxsamaan oo si buuxda loogu duubay fiidiyowga codka kaliya.
Apr 26, 2007 at 5: 13 PM
Dhammaan shirkadaha waaweyn waxay dib u habeyn ku sameeyeen xeerarkooda adeegsiga waxayna ku sii wadaan inay ku sii wadaan si joogto ah. Waxay u baahan tahay dib u eegis joogto ah. Waxaan kaliya uga digayaa dadka inay tahay inay dib u eegaan dhamaan shuruudaha isticmaalka kahor inta aysan soo galin wax 'ay u maleynayaan' inay iyagu leeyihiin. Waan necbahay inaan arko qof luminaya xuquuqda muusiggiisa ama fiidiyowgiisa si fudud adoo u soo dhigaya server… halkaasoo qof kale uu ka faa'iidi karo!
Aug 22, 2008 at 5: 53 AM
Halkan Kiqlo kale oo sax ah
Kiqlo ma xiiseyneyso helitaanka xuquuqda waxyaabaha ku jira. Kiqlo waxay kuu ogolaaneysaa inaad iibiso nuxurkaaga intaad ilaalineyso xuquuqdaada. Waad ku shubi kartaa bilaash, waad ku iibin kartaa bilaash oo Kiqlo wax goyn ah kama jarto. Waa run! Qabasho maleh!
Waad soo dejisan kartaa, soo dejin kartaa adiga oo aan soo galin. Haddii aad rabto inaad iibiso waxaad u baahan tahay inaad gasho. Waa fikrad cusub laakiin si sax ah ayaa loogu talagalay ujeedadan.
Oktoobar 21, 2008 at 2:25 AM
Fadlan noo soo sheeg waxa aad ka aaminsan tahay Ourstage.com. Xaaskeyga iyo aniga labaduba waxaan nahay qoraayaal heeso waxaanan dhowr meelood ka dhignay bartooda Maalmihii ugu horeeyey waxaa nalaga dhigay 10ka ugu sareeya iyadoo inyarna xitaa loo aadayo lambarkeena gobalkeena 4 ilaa 5 maalmood ka dib, heesaheena oo dhami waxay hoos ugu dhacaan hoose ama dhexe ee qiimeynta iyo codeynta heesaheena u samee leef macno midkeenna midkoodna ?? Waxay ku andacoodaan in xuquuqda oo dhan ay inaga ahaato iyo in iibka oo dhan uu ku dhacayo akoonkeena paypal laakiin ilaa iyo haatan kama aanan dhigin lacag diinaad ah dhiig daadinta heesaheena la soo dhajiyay. Ma waxaa naloo qaadayaa raacid? Waan aqriyay heshiiska intiisa badan laakiin ma wada aqrin. I ass-u-med wax walba kor ayey u socdeen korna waa u socdeen laakiin markaan aqriyay shantaada sababood ma hubo?
Waad ku mahadsantahay bartaada. Maalin wanaagsan haloo dareemo barakooyinka waxa nolosha iyo jacaylku kuu hayaan maalinba maalinta ka dambaysa.
Nov 18, 2009 saacadu markay tahay 10:13 PM
Dhanka kale ha ku shubin miyuusiggaaga meel kasta oo magac ha u noqon inta ka dhiman noloshaada!
Haa, had iyo jeer akhri shuruudaha iyo shuruudaha (waad ku kalsoonaan lahayd inaadan aqbalin) inta badanna kuwan looma xadgudbo.
Waxaan u maleynayaa inay tahay arrin wax yar la siinayo si wax yar loo helo, ma filan kartid soo-gaadhis adigoon is muujin naftaada (raaligelinta muujinta) Waxaan ahay halabuur wax u qora TV / filim, waxaan maareeyaa inaan ku noolaado nolol wanaagsan oo aanan jeclayn fursad ka istaag jahannamada haddii aanan ku kalsoonaan lahayn dadka inaan ku xadgudbin iimaanka iyaga ku jira ee aan geliyey wareejinta muusigeyga. (oo wali waa inaan sidan sameeyaa markasta, haddii kale shaqadu way qallali doontaa)
Xadgudubka ugu badan ee muusigeygu wuxuu yimid kadib markii muusigeyga laga sii daayay TV-ga kadibna loo iibiyay si rasmi ah iTunes iwm, qof ayaa go'aansaday inuu iibsado ka dibna ku dheji taageerayaasha barnaamijka TV-ga uu ka yimid, ee bilaashka ah.
Lacag baa laygu siiyaa youtubeka markii muusigeyga la ciyaaro maxaa yeelay taasi waa sida dhabta ah ee ay u shaqeyso, ma ahan sida maqaalka ku qoran (Waxaan xubin ka ahay bulshada ururinta taas hubiya taas) PRS
Marka fadlan yaan lagaa dhigin qodobkan.
4, 2009 at 12: 27 AM
Miyaad u maleyneysaa inay dadku ku soo qulqulayaan goobtaada qaybta gadaal-gadaasha ee internetka si aad u aragto fiidiyowyo yar? Dadku waxay aadaan Youtube iyo bogag kale maxaa yeelay waa caan waxayna dadku u badan tahay inay arkaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Waxaan dhihi lahaa boqolkiiba 80% + wanaagsan dadka wax soo galiya ayaan dan ka lahayn inay isticmaalaan iyo in kale, waan ogahay ma ihi. Hubso inay ku helaan hits bilaash ah boggooda, laakiin taasi waa ganacsigooda. Adigu uma soo raraysid iyaga haddii aysan helin hits. Dariiqa kaliya ee aad ku iibsan karto degel kuna heli karto xuquuqda lahaanshaha waxa ku jira waa haddii aad tahay koox caan ah, caan ah oo soo saarta fiidiyowyo iyo / ama sawirro badan. Haddii kale waxaad uun xoqaysaa geeskaaga oo aad isku deyeysaa inaad muhiim noqotid.